Shirkadeena - Shineon Technology Co., Ltd.
ShineOn waa hormuudka xirmada caalamiga ah ee loo yaqaan 'LED LED' iyo qeybta xalka moduleka ee nalalka iyo suuqyada lagu soo bandhigo. Waxaa la aasaasay Janaayo 2010. Waxaa aasaasay koox khubaro ah oo ku takhasusay warshadaha optoelectronics oo khibrad u leh shirkadaha tikniyoolajiyadda sare ee Mareykanka. ShineOn waxaa si xoogan u taageeray shirkadaha caanka ah ee USA iyo Shiinaha, oo ay ku jiraan shirkadaha GSR, Northern Light Venture Capital, IDG-Accel Partners iyo Mayfield, waxaana sidoo kale taageera dowladda hoose ee Beijing.
ShineOn wuxuu soo saaraa xirmooyinka adduunka ee hogaamiya xirmooyinka iyo modules waxqabadka sare, midabada ballaaran ee TV-ga gadaal u iftiimiya iyo waxtarka sare, isha iftiinka sare ee kalsoonida. Waa SMD, COB, xirmooyinka CSP iyo moduleka isku dhafan ee wadaha ee 'DOB' waxaa isticmaalay TV badan oo tayo sare leh iyo macaamiisha laydhka guud.
ShineOn waxay shahaadada ka heshay CNAS iyo EPA shaybaaradeeda LM-80. Waxay ku hirgelisay nidaamka MES iyo ERP horumarsan khadkeeda wax soo saar waxayna sameysay nidaam maareyn tayo leh oo adag. Aragtida shirkaddu waa inay u fidiso macaamiisha xalal tartan iyo alaabooyin la isku halleyn karo, iyo inay macaamiisheeda ku darsato qiimo.
ShineOn waxaa loo aqoonsaday inay tahay shirkad 2011 Global Clean-tech 100, waxayna ku guuleysatay 2013 Red Herring Global 100 Award. Waxaa sidoo kale loo magacaabay 2014 Deloitte Top 50 Shirkadda Tiknoolojiyadda Sare ee Sare ee Shiinaha.
Ka dib sannado horumar deg deg ah, si loo daboolo baahida suuqa ee sii kordheysa ee qalabka iyo aalado tayo sare leh, "Shineon (Nanchang) Technology Co., Ltd." waxaa la aasaasay bishii Oktoobar 2017 magaalada Nanchang. Waxaan ka faa'iideysaneynaa Beijing & r iyo D iyo caalamiyeynta, oo ay weheliso faa'iidooyinka gobolka iyo warshadaha Nanchang, dardargelinta ballaarinta cabirka wax soo saarka ee qalabka baakadaha optoelectronic oo tayo sare leh iyo qeybaha moduleka, si loola kulmo macaamiisha gudaha iyo shisheeyaha ee dalbanaya alaab tayo sare leh ee ShineOn.
Shineon - waa sumcad caan ka ah adduunka oo ka mid ah xirmooyinka LED-ka iyo soo saaraha qaybaha.
U samee karti kasta habeyn shuruudahaaga.
10 sano oo si isdaba joog ah u kobcinaya waayo-aragnimada xirmooyinka LED-ka iyo warshadaha qaybaha.